Imoto yokuqala kagesi yase-Uganda eyakhiwe abafundi - i-Afrikhepri Fondation
ngomgqibelo, ephreli 10, 2021
Imoto kagesi Kiira EV
UIqembu labafundi base-Uganda abavela e-Faculty of Engineering, Design, Art and Technology eMakerere University bakhe imoto yokuqala kagesi yase-Uganda (iKiira EV) cishe ezinyangeni ezingama-30. Imoto ihlolwe ngempumelelo ngoNovemba 1, 2011 eMakerere University. Kusesibonelo kuphela, kepha iningi lezinto ezihlala abantu ezimbili zenzelwe futhi zakhiwa e-Uganda: umqeqeshi, uhlelo lokushisa, njll. Iphrojekthi yale moto ebizwa nge-VDP (Vehicle Design Project) iyingxenye yemizamo exhaswa futhi isekelwa nguMongameli wase-Uganda.
Amabhethri emoto anebanga elingamakhilomitha angama-80 futhi ugesi uwukuphela komthombo wamandla asetshenziselwa ukusebenzisa i-Kiira EV (okwenza kube yimoto ethule kakhulu). Ezinye izimoto zizokwenziwa, kufaka phakathi i-7-seater kanye neveni yezihlalo ezingama-30 enebanga elingamakhilomitha angama-200 ngenxa yepaneli elanga.
Le moto yaklanywa ngumakhi wezimoto okhaliphile, uJonathan Kasumba. Ngempela, kubalulekile kumaphrojekthi anjalo ukuthi agxile ngokwengxenye kwinqubo yokuklama imoto. Okubalulekile kunoma yikuphi ukwakhiwa kwezimboni, ikakhulukazi uma imoto izokhiqizwa ngobuningi.
Kubize ubuhlakani cishe ngama- $ 35 ukuhlanganisa lolu hlobo, yize izindleko kucatshangwa ukuthi zehliselwe ku- $ 000.
Ithimba lonke ebelisebenza kule phrojekthi okungenani likufakazile ukuthi abantu base-Afrika bangangena kalula kumaphrojekthi anzima kakhulu futhi baphumelele. Lokhu kufakazela futhi, ukuthi abantu base-Afrika banethalente nobuhlakani nokuthi imboni yezimoto e-eco-friendly e-Afrika isondele.
Izinwele ze-kinky ezinempilo zendalo yobuhle
Buka i-Pelé (i-2016)
Kwake Kwaba Esikhathini Umbuso Wase-Afrika - Imibhalo (2010)